Madaxwaynaha Kilinka 5-aad oo la kulmay qurbajoogta deegaanka - BBC News Somali
Madaxwaynaha Kilinka 5-aad oo la kulmay qurbajoogta deegaanka
Image caption Madaxwayne Cabdi Maxamuud Cumar
Madaxwaynaha dowlad deegaanka Soomaalida Ethiopia, Cabdi Maxamuud Cumar, ayaa Miniapolis ee dalka Maryakanka kulan kula qaatay qurba-joogta ka soo jeedda deegaanka Soomaalida ee Ethiopia.
Waxaa dadka uu madaxwaynuhu la kulmay lagu qiyaasay ilaa 2 kun iyo shan boqol oo qof.
Waxaa kaloo soo baxaya warar sheegaya in dad lagu qiyaasay ilaa laba boqol oo qof ay goobta uu kulanku ka dhacayay dibadbax ka sameeyeen.
Weriyaha BBC Maxamed Xaaji Xuseen, ayaa la kulmay qaar ka mid ah labada dhinac.
Wuxuu marka hore la hadlay qurba-joogta soo dhowaysay madaxwaynaha ee ka qaybgalay kulanka uu ugu baaqay dadka deegaankiisa ka soo jeeda.
Markanna waa kuwan qaar kale oo iyagu ahaa kuwii ku mudaaharaadayay madaxwaynaha deeganaka Soomaalida Ethiopia, Cabdi Maxamuud Cumar oo u waramaya weriye Maxamed Xaaji Xuseen.
Madaxwaynaha dowlad deegaanka Soomaalida ee dalka Ethiopia, Cabdi Maxamuud Cumar, oo shalay magaalada Miniapolis ee dalka Maraykanka kula hadlay qaar ka mid ah jaaliyadda Soomaalida Ethiopia ee ku dhaqan halkaas.
Kulankiisa shalay ayaa sidoo kale waxaa jiray koox ku dibadbaxday oo ku doodaysa in uusan matalin gobolkaas oo uu dambi ka galay.
Waxaanu shalay la hadalnay qaybo ka mid ah dadka kulanka ka qaybgalay iyo kuwa diidanaa booqashada madaxwayne Cabdi Maxamuud Cumar.
Hase yeeshee, markan ayaanu madaxwaynaha laftiisa kala hadalnay dhacdooyinka la xiriira booqashadiisa Maraykanka.
Weriyaha BBC Maxamed Xaaji Xuseen, ayaa marka hore waydiiyay in uu ka warammo kulanka uu la qaatay qurbajoogta ka soo jeedda gobolka ee ku nool Miniapolis?
Wuxuu madaxwaynuhu ka hadlayaa sida loogu soo dhoweeyay Miniapolis. Wuxuu ku eedaynayaa kuwa ku bannaanbaxay in aysan go'aan lahayn oo dano kale u adeegayaan, isagoo tiradooda aad u yareeynaya kuna tilmaamay dhowr iyo toban.
Wuxuu aad ugu nuuxnuuxsanayaa qorshaha qurbajoogta dowladiisa ugu talogashay in ay ka qaybqaataan horumarka gobolka iyo kobcinta dhaqaalaha.